BUDDHIST TERMS' Dictionary: PRECEPTS BASED ON ABSTENTION - ၀ါရိတ္တသီလ
PRECEPTS BASED ON ABSTENTION - ၀ါရိတ္တသီလ
PRECEPTS BASED ON ABSTENTION Vᾱritta Sῑla
၀ါရိတ္တသီလ - ၀ါရိတ္တသီလ၊ မပြုရဟု တားမြစ်ထားသော သီလ။
မြတ်စွာဘုရား၏ ပညတ်တားမြစ်ချက်ကို မပြုလုပ်မိအောင် ရှောင်ကြဉ်သောအားဖြင့် ဖြည့်ကျင့်အပ်သော သီလမျိုးသည် ၀ါရိတ္တသီလ မည်၏၊ ငါးပါးသီလ အစရှိသော နိစ္စသီလမျိုးကို မလွန်ကျူးမိအောင် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ပြည့်အောင်ဖြည့်ကျင့်ယူရသည်။
Morality based on abstention or avoidance
Morality which is based on the observance of abstentions decreed by the Buddha is vᾱritta sῑla. Constant observance of the five precepts, etc., nicca sῑla, is fulfilled through abstention.
See also MORALITY, MORAL OBLIGATIONS.